महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ? – Patrika Nepal
पुष १७, २०७८ शनिबार 37
मन्दिर निराहार शुद्ध भएर जाने गरिन्थ्यो । महिनावारीमा मन्दिर निराहार निर्जल जादा घण्टौ साधना गर्दा तिम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्छ तिमी झन कमजोर हुन्छौ भनेर मन्दिर नजाउ भनिएको हो ।कालान्तरमा यो निषेधको रुपमा बुझियो । भारतमा काम्ख्या मातालाई नै पिरियड हुन्छ । हिन्दु समाजमा नारी देवि हुन् ।यदि नारीले हिन्दु धर्म संस्कार संस्कृती जोगाउन नसके एउटा युग गुमाउनेछन् । तिमी महिनावारीमा अछुत वा अयोग्य हुदैनौ तिमी मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर बनाउने मान्छे जन्माउने पनि तिमी/नारी हौ । तिमी जुनसुकै बेला मन्दिर जान सक्छौ । किन नजान भनियो फरक कोणबाट हेर्न सक्छौ । हिजो कुन अभ्यास थियो त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र प्रश्न गर । राम्रो लागेमा अवश्य शेयर गर्नुहोला ।
Prevभाउजु लिएर देवर भा’गे,कारण थाहा पाउदा सबै च’कित !
Nextयी सरकारी अधिकृत छोरीले आफ्नै बुबालाई कन्यादान गर्न दिएनन् … कारण थाहा पाउँदा तपाइका आँखा रसाउने छन्!